Mitsangana ry Malagasy : « Tsy hiteraka fitoniana ny fanamelohana ny loholona Lylison » | NewsMada
Mitsangana ry Malagasy : « Tsy hiteraka fitoniana ny fanamelohana ny loholona Lylison »
Tsy niandry ela. Namoaka fanambarana avy hatrany koa ny eo anivon’ny Mitsangana ry Malaagsy (MRM). Nambaran’izy ireo fa tsy hitondra fitoniana ary hampafampana ny raharaha politika ny fanamelohana higadra an-tranomaizina ny loholona Lylison. « Tsy mahavaha ny olana andavanandron’ny Malagasy izany. Eo ny varoboba, atao amin’ny tanin’ny Malagasy, ny fandrobana ny harem-pirenena, ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny delestazy tsy ahitam-bahaolana, ny fitsaram-bahoaka sy ny tsy fandriampahalemana an-tanan-dehibe sy ambanivohitra », hoy ny MRM.
Nohitsin’izy ireo fa fitsarana an-tsokosoko, tsy nisy fampiantsoana iny natao iny ka namoahana didy. Natao hanodinana ny saim-bahoaka fotsiny tsy hiatrehany ny adim-piainana sy ny olana isan-karazany. « Midika ho tsy fahaiza-manao sy tsy fahaizam-mitantan’ny fitondrana anefa izany », hoy ihany ny MRM.
Notsiahivin’izy ireo fa anisan’ny niady fo mafy ary nanohana ny filoha Rajaonarimampianina ny loholona Lylison ary nahatonga azy eo amin’izao fitondrana izao. Mitovy amin’ny Malagasy antapitrisany diso fanantenana izy manoloana izao fitantanana ny firenena izao. Nohelohina tsy nanana mpiaro na mpisolovava anefa io loholona io. « Manoloana izany, takinay ny hametrahana ny tena fanjakana tan-dalàna, nambaran’ny kandidà Rajaonarimampianina fony kandidà ny taona 2013. Mazava izany izao ny toromarika fa henjehina sy samborina ary hampihorohoroana ireo mba miteny sy maneho hevitra », hoy ny MRM.